Delicious inyama yembuzi: ikakhulukazi ukupheka, zokupheka
Inyama yembuzi, okumnandi nokunomsoco kakhulu, hhayi njengoba isivakashi njalo kumathebula yethu. Ngokuvamile, okulungiselelwa abasemikhayeni wahlanganyela yokuzalela lezi zilwane. Noma kulezo izindlu lapho umnikazi umzingeli. Njengomthetho, inyama izimbuzi angathengwa kuphela emakethe, futhi ngisho nangalesosikhathi ngaso sonke isikhathi. Njengoba ukuthenga ke emashalofini nezitolo ezinkulu ezivamile, futhi akubonakali. Cishe, ngenxa yokuswela housekeepers zethu akuzona izitsha athandwa inyama yembuzi. Ngaphezu kwalokho, kukhona bezibona ukuthi inyama has a nephunga ethize futhi kuba lukhuni, kungakhathaliseki kanjani yalungiswa noma indlela. Kuyaphawuleka ukuthi konke lokhu limane izinganekwane. Uma ulandela ukulandelana izenzo kuphakanyisiwe ukulungiswa noma yimuphi dish inyama yembuzi zokupheka, kanye ngokukhalipha ukukhethwa inyama basondele, okukhiphayo ungathola okumnandi, kunambitheka isidlo esikhulu. Ngaphezu kwalokho, futhi ewusizo kakhulu.
Ngakho, indlela ukupheka inyama yembuzi?
Imithetho Ukukhetha futhi isitoreji
Imbuzi kubhekwa umkhiqizo wezokudla. Nokho, ngokwezinga elikhulu lokhu kusebenza inyama yezilwane abasha. it is esidala embozwe zamatshe aphuzi amafutha, ngaphezu, mnyama kakhulu ngombala. By the way, ngokwazi ehilelekile kungenxa yokungabikho uzokhetha. Ngaphezu kwalokho, notorious iphunga eyinqaba esivela isikhumba sesilwane Ngakho-ke, ukuthola inyama ngaphandle kwalo, aniyona flavour ezengeziwe uzizwa. Kodwa ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi ezinye iphunga kanye slime, okuyinto esivela kunoma imuphi umkhiqizo endala plan onjalo, banake kubalulekile.
Njengoba labapheki cabanga zonke izakhiwo zayo eziwusizo (zazo, ngenhlanhla kakhulu) imbuzi isagcine fresh izinsuku ezintathu. Ngakho-ke, uma uthenge akuyona enkulu kakhulu izitho ngezitho kanye kuphela izitsha ambalwa, bese ukwehlukanisa inyama ngokuyinhloko enkothweni. Ngakho-ke kuyokwenziwa ligcinwe isikhathi eside. Uma umkhiqizo omningi esifanayo, lawo manzi asele engcono ngokushesha ngemva ukusika ukuthumela efrijini.
Falling ngaphansi kwethonya inganekwane efanayo mayelana "imbuzi" iphunga, abaningi ngaphambi ukulungiswa cishe kunoma iyiphi isidlo nakanjani marinate inyama. Lokhu akunembile. inyama Good zamazinyane yasekhaya, ngakho ngisho ngaphandle isikhumba, kuncike kule nqubo kufanele kuphela, uma kudingwa ekwakhiweni. Enye into - izinyoni zasendle. inyama yabo egxeka ngempela, futhi kancane reeks ngisho nangemva ahlabayo ngokucophelela. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ekulungiseleleni noma yimuphi isidlo zasendle imbuzi zokupheka, futhi cishe bonke yakhiwa iphuzu lapho ecacisiwe isidingo pickling.
Kepha marinade ke kungase kube isimo esihlukile, kodwa ngokuvamile ezisetshenziswa iwayini ezomile (mhlawumbe white), kanye nezithelo uviniga - yamagilebhisi, apula. Kuzo zonke ezinye izici ukulungiswa inyama akuhlukile yezinye izinhlobo. Into nje phakathi kwesinye nje ukwelashwa ukushisa Kufanele andise kancane ukuze kube ethambile.
Awu, bese uqhubeke ngqo ku ukukhuluma kanjani nokuthi yini ungakwazi ukupheka izitsha okumnandi inyama yembuzi.
Omama abaningi abasemakhaya, abathanda futhi ukwazi indlela ukupheka izitsha inyama yembuzi, ngokuvamile makudle eyosiwe. Kuyaqondakala. Inyama yembuzi ngokuvamile ilungiselela isikhathi eside, ngakho ufuna ukwenza inqubo okhiqiza ngangokunokwenzeka. Eyosiwe kuvela esihlwabusayo kakhulu futhi okunomsoco. Uma ukupheka lokhu isidlo umthamo omkhulu, kungenzeka ukondla umkhaya kwaze kwaphela izinsuku eziningana, futhi akekho oyothi, "Namuhla for kwasemini thina siphinde sibe into efanayo." Plates kungazelelwe umndeni awunalutho. Amanye amalungu omkhaya futhi zidinga Izithako.
Kodwa ukulungiselela wobuciko Culinary enjalo, kudingeka Thenga kakhulu: a amakhilogramu inyama yembuzi (ungathatha izimbambo), ubhontshisi (mhlawumbe oluhlaza, futhi thatha ezidingekayo 300 g), i-cupolas ezimbili, eyodwa kilogram amazambane, ingilazi yobisi, ufulawa (anele isigamu inkomishi), uhhafu pachechku ibhotela.
Njengoba sishilo lapho bapheka kusuka inyama yembuzi abasha, pickling ayidingekile. Ngaphandle-ke, lesi silwane akusho gxuma akunjalo kudala emahlathini, futhi ziklabile ngokuthula ngemva kwendlu. Inyama kufanele ayifake ebhodweni, engeza usawoti bese upheka cishe ihora. Ngesikhathi esifanayo, ukupheka amazambane. Futhi lapho sihlala esikhunjeni. Thatha isidlo bhaka ukwenza kube "isiguqo" ubhontshisi oluhlaza aqotshwe anyanisi izindandatho. Beka phezulu inyama. Cover ke ehlutshiwe wanquma amazambane inkulu ngokwanele. Futhi ukulungiselela sauce. Esikhathini bhotela engeza ufulawa, ivuse, ke uthele ubisi. Futhi Bilisa ingxube imizuzu emihlanu. Ukungazikhohlwa ukuqhatha ke. Khona-ke inkathi usawoti, pepper, ungakwazi ukwengeza nesweli oqoshiwe. Gcwalisa-ke nge sauce ashisayo bese uthumela it kuhhavini. Zonke. Ihora, ungakwazi bayakhohlwa ashisayo. Emva kwalesi sikhathi, sithola ifomu, afafaze dish ne kalamula dish out phezu kwezitsha. Sekuyisikhathi etafuleni!
Yini enye ingenziwa inyama yembuzi? Yiziphi ezinye izindlela ezithakazelisayo? Imbuzi iphendula nje risotto okukhulu. Kukholakala ukuthi lokhu inyama kakhulu efana iwundlu, okuyinto, njengoba umthetho, ayisithako esiyinhloko izitsha abadumile asempumalanga. Ngakho-ke, bapheka inyama yembuzi, noma kunjalo, akufanele sikhohlwe leli phuzu. Futhi uma une iresiphi pilaf, okuyinto wena ocabanga ukuthi baphumelele kakhulu, phambi inyama yembuzi endlini ungakwazi ngokuphepha wakubeka ngale isidlo esikhundleni iwundlu. Thina, ngakolunye uhlangothi, ngeke ukukunikeza version yethu. Ngaphezu kwalokho, le pilaf ingalungiswa kahle ngokufanayo kokubili ngesikhathi ipuleti futhi multivarka.
irayisi Round (kg) cwilisa ihora ngamanzi abandayo, bese uxubha it futhi ukuba uketshezi ushise. Inyama (amakhilogramu kakhulu) uthathe yizicucu ngokungenasizathu upheke epanini ukuthosa e juice yabo, ngemuva ukuhwamuka uzama ukufeza uqweqwe crispy ngaphandle uwoyela. Ukuze wenze lokhu, nje ngokwanele ukuthi ube ne izitsha eliphezulu futhi njalo ushukumisa inyama. Ekupheleni ukupheka, engeza anyanisi oqotshiwe ezinqumela ke, kamuva imizuzu emihlanu, isanqante vukuza. Govuza imizuzu 5 ke ukupheka amanzi bese ugcwalisa ibila kuze kube uqweqwe iba kakhulu viscous. Ngemva kwalokho Yibeke imbiza / yokucela / Multivarki isitsha, uthele irayisi futhi ngaphandle kokwengeza amanzi, upheke isigamu sehora. Bese wengeza izinongo nosawoti ugovuze, ukupheka isidlo imizuzu eyishumi. Uma upheka multivarka, imodi elikhulu - "pilaf". Uma kungenjalo, kungcono ukuthatha "Pastries".
Ngasekuqaleni sakhuluma indlela ukulungiselela izitsha ezivela izinyane lembuzi. Kodwa kuthiwani uma uzithela inyama yomhlatshelo isilwane akuyona usemncane? Zama ukupheka Shurpa. Lokhu dish ibhalwe, njengoba umthetho, isikhathi eside ngokwanele ukuze inyama "sobudala" Kunoma yikuphi, uyobe uthole umsungulo kunesidingo.
Kilogram inyama yembuzi, uthathe nezixhobo ezinkulu, wafaka epanini, amboze ngamanzi bese ibila for isigamu sehora. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukufinyelela futhi epholile. Khona-ke uthathe yizicucu amancane. Fry in amafutha yemifino, onion rings Diced eyodwa morkovochku enkulu. Bese wengeza inyama, inkomishi umhluzi, ivuse amabili tipunu utamatisi unama, ibila zonke kuze kuphele isigamu sehora. Ngemva kwalokho, abantu abaningi okuholela edingekayo ukuze sibeke epanini, uthele umhluzi esisele (it Uzodinga inani elithile izithako ilitha, ngakho uma ungenawo ngokwanele, Baphehl Amanzi) Govuza e Diced amazambane amathathu, usawoti, pepper bese upheka elinye ihora. Lapho sikhonza, ufafaze amakhambi phezu plate.
Ungacabangi ukuthi izitsha inyama yembuzi uzilungiselele usebenzisa kuphela yonke inyama. Ungenza ukuphuma kuso kanye ukugxusha okukhulu. Yikuphi endleleni, ilungele labo kwenzakala anawo wonke izidumbu imbuzi at. Inyama engcono kungaba ukushiywa gourmet izitsha kanye zonke izinhlobo ezilahliwe futhi izingcezu hhayi kakhulu mnandi ukwenza ukugxusha. Kuphela kuyinto efiselekayo kukho kancane nesinqumela noma amafutha izitsha okuphekwe babe juicier.
Indlela ukupheka nengulube inyama patties kulokhu? Yebo, isimiso, cishe ncamashi fana njengoba phi nye. Kuphela uwayehlalise elitheni Kunconywa ukuze ungeze kudingekile ofakwe ngobisi isinkwa. Zonke ezinye - konke bendabuko. Ngo yenkomo, ngaphandle induku, engeza onion noma garlic, izinongo, amaqanda. Akha patties kanye gazinga imizuzu okungenani eziyisihlanu ngalapha nangalapha.
Labekhuluma ngalo kukhona izitsha inyama imbuzi, akunakwenzeka ukuba indiva futhi izoso. Kahle lelungiselelwe, ngeke kusimangaze ukunambitheka yakho ngisho gourmet ebona.
Ngakho, yini okudingeka yenziwe. Okokuqala, ukusika ngesikhathi oyifunayo ezidlula izingcezu bese likhishwa kusuka amafilimu ehlukahlukene streaks inyama (iresiphi ngayinye ukunikeza ngamakhilogremu amabili) ofakwe amahora amathathu amanzi anosawoti. Ngemva kwalokho, uketshezi akhanywa. Inyama obsushivayut futhi wathumela e isitsha esikhulu, ligcwele oqoshiwe onion izindandatho (izingcezu ezinhlanu). Bese wathela amalitha amane wamanzi, kulo ezimbili spoonfuls uviniga ungeze yamagilebhisi (9 akudingeki ukuthatha amaphesenti), ezintathu leaf lavrushki nedlanzana uphizi emnyama nosawoti. Isithako zokugcina, futhi seasonings zakho ozithandayo kunezelwa ngezikhathi, ukunambitha. Amanzi okugqumisa amahora angaba ngu-12 ngenkathi ugcina umthamo endaweni epholile. Khona-ke ungaya for a epikinikini futhi apheke izoso ngendlela yendabuko.
A amazwi ambalwa mayelana inyama yezilwane zasendle kanye pickling
Sishilo kakade ukuthi uma bapheka inyama yembuzi zasendle, kuyinto efiselekayo ukuthi isakhi esiyinhloko is phansi pickling. Futhi uma ngokufanele bafeze lo inqubo, ungakwazi Fry it on the hlupha izingcezu kunalokho enkulu, hhayi ukukhathazeka ngesikhathi esifanayo, inyama kuyoba ezinzima futhi ihlaba umkhosi kunuka kabi. Kunalokho, silungiselela ke ngendlela angakwazi kuphela kusimangaze izivakashi ngesikhathi ephathini, ukuziqhayisa amakhono ayo Culinary, futhi amakhono ukuzingela. Kepha marinade iresiphi, ethandwa kakhulu yilezi ezilandelayo: thatha isigamu ilitha iwayini ezomile elimhlophe bese wengeza iwayini noma yamagilebhisi uviniga. Ngokusho ukunambitheka yakho siqu. Kukhona futhi uthumele ingcosana noma ezimbili usawoti, ingxube efanayo omnyama red pepper, abambalwa amahlamvu lavrushki, clove ezimbili noma ezintathu nesweli oqoshiwe kakhulu fake. Kancane kulungele umlilo, bese uthele le marinade phezu inyama. Exposure time - okungenani ngosuku.
Futhi ekugcineni ukwethula kini an iresiphi ezithakazelisayo kusukela nembuzi yasendle.
Imbuzi ngobisi lukakhukhunathi
amakhilogramu Omunye nengxenye yokugcwalisa inyama marinade, walungisa ngokusho iresiphi ethulwa ngenhla. Abamelana suku. Khona-ke shift zibe epanini, engeza utamatisi ngaphambilini oqoshiwe, bell pepper, anyanisi. Thela ezintathu wezipuni zamafutha omnqumo, engeza amanzi ukuze nje amboze inyama, ibila kuze ithenda. Lapho imbuzi usulungile, engeza ukuba ibhodwe, amabili izinkomishi ngobisi lukakhukhunathi, qhubekani ukushisa imizuzu elishumi. Uma umndeni wakho ine umzingeli, futhi njengoba indondo eletha ikhaya imbuzi, qiniseka ukuzama ukupheka inyama yalo ngale ndlela. Ngeke uzisole!
Fern: iresiphi namazambane futhi inyama
Sponge ikhekhe nge-apula
Ukupheka ujamu iplamu: ngamatshe futhi ngaphandle
Ubude ogwadule eSahara ukusuka enyakatho kuya eningizimu, kusukela eningizimu kuya enyakatho
Imisebenzi-search - izinto eziyisisekelo uphenyo ngempumelelo
Squash ebusika: isaladi zokupheka kanye cell
Umprofethi uJona - umprofethi madolo-nzima. indaba Engcwele-kuyindida yeBhayibheli
Njengoba esifubeni zaprivatit ngakolunye futhi ngokwabo?
Likuphi Guatemala? Guatemala kumephu izwe: izici ezindawo yezwe